तिलोत्तमामा सुरु भयो वृक्षरोपण सप्ताह | Ekhabar Nepal
तिलोत्तमा, साउन २६ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिमा शनिबारबाट वृक्षरोपण सप्ताह सुरु भएको छ । ‘ग्रीन तिलोत्तमा ः क्लिन तिलोत्तमा’ नाराका साथ नगरपालिकाले भदौ १ गतेसम्म चल्नेगरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्न वृक्षरोपण सप्ताह आयोजना गरेको हो ।
यसैबीच तिलोत्तमा–४, स्थित प्रस्तावित बालउद्यान क्षेत्रमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच विरुवा रोपी नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले वृक्षरोपण सप्ताह सुभारम्भ गर्नुभएको छ । त्यसअवसरमा उप—प्रमुख जागेश्वरी चौधरी, नगरकार्यपालिका तथा नगरसभा सदस्य, कर्मचारीहरु, विभिन्न संघ—संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुका साथै स्थानीय बासिन्दाले विरुवा रोपेका छन् । वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष दिवाकर ढकालले शनिबार वृक्षरोपण सप्ताहको सुभारम्भ मात्र गरिएको बताउँदै प्रस्तावित बालउद्यान क्षेत्रमा व्यवस्थित तरिकाले थप विरुवाहरु रोपिने बताउनुभयो । कार्यक्रमको संयोजन वडा नं. ३ र ४ ले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । वर्षाका बीच सहभागीहरु वृक्षरोपणमा सहभागी भए ।